आईओएस १ | मा ब्याट्रीको जीवन सुधार गर्ने युक्तिहरू आईफोन समाचार
आईओएस १ in मा ब्याट्रीको जीवन सुधार गर्ने युक्तिहरू
स्वायत्तता उपकरणको जहिले पनि एक धेरै विवादास्पद बिन्दु भएको छ जब हामी यसको बारेमा कुरा गर्थ्यौं आईफोन। समय बित्दै जाने र "ठूला" उपकरणहरूको आगमनसँग यसले थोरै सुधार हुँदै आएको छ, यद्यपि यो प्रयोगकर्ताहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। हामी आज केहि ट्रिकहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने छौं जसले हामीलाई धेरै मद्दत गर्न सक्दछन्।
हामी तपाईंलाई सिकाउँछौं कसरी हाम्रो आईफोनको स्वायत्तता सजिलै र चाँडो अधिकतम पार्ने। आईओएस १ of को आगमन पछि तपाईंले थाहा पाउनुपर्ने यी सबै चीजहरू हुन् ताकि तपाईं दिनमा एक पटक धेरै पटक तपाईंको आईफोन चार्ज गर्न रोक्नुहोस्, त्यसैले हामी तपाईंलाई आज यहाँ के भन्न चहान्छु भन्ने कुरा याद नगर्नुहोस्।
1 पृष्ठभूमि अपडेट
2 स्थान सेटिंग्स
3 स्वचालित चमक र activ सक्रिय गर्न लिफ्ट »
4 4G लाई मूल्यवान छ?
5 ब्याट्री प्राप्त गर्न सानो सल्लाह
हामी पुरानो परिचितबाट शुरू गर्दछौं जसले आईओएस उपकरणमा महिमा भन्दा बढी दु: ख दिन्छ। यस मितिमा, आईओएसमा वास्तविक-समय मल्टिटास्किंग अझै पनि विभिन्न कारणहरूको लागि असम्भव छ, तथ्यलाई बावजुद चित्र-इन-चित्रले चीजहरू धेरै सजिलो बनाइरहेको छ।
यद्यपि एप्पलले केहि अनुप्रयोगहरू चालु गर्न अनुमति दिँदछ "पृष्ठभूमिमा" जब हामी कार्यका अन्य प्रकारहरू प्रदर्शन गर्दछौं। कम से कम यसले निश्चित समय र प्रदर्शन सीमितताका साथ यसलाई अनुमति दिन्छ। यो पहिलो टाउको हुन गइरहेको छ जुन हामीले काट्ने छौं।
En सेटिंग्स> सामान्य> पृष्ठभूमि अपडेट हामी अवलोकन गर्न सक्षम हुनेछौं कि पूर्वनिर्धारित रूपमा सबै अनुप्रयोगहरू हाम्रो उपकरणमा यो प्रकार्यात्मक सक्रिय गर्दछ। यसले अनावश्यक रूपमा स्रोतहरू र ब्याट्री खपत गर्दछ, किनकि व्हाट्सएप वा ट्विटरको सामग्री प्रिलोड गर्दा हामीलाई आधा सेकेन्ड मात्र बचाउँदछ र हामीलाई वास्तवमै यसको आवश्यकता छैन।
सेटिंग्सले हामीलाई परिभाषित गर्न अनुमति दिन्छ यदि हामी सीमित गर्न चाहान्छौं, उदाहरणका लागि, यो कार्यक्षमता क्षणहरूमा जब हामी वाइफाइद्वारा जडान हुन्छौं, केहि यस्तो चीज हो जुन पहिले नै एक महत्त्वपूर्ण ब्याट्री बचतलाई मानिन्छ। मेरो सल्लाह भनेको विशाल बहुमतका अनुप्रयोगहरूको पृष्ठभूमि गतिविधि असक्षम पार्नु हो, तपाईंको ब्याट्रीले यसलाई धेरै सराहना गर्छ।
यद्यपि यस बारेमा धेरै विवादहरू छन्, कविता वा कारणबिना हाम्रो ब्याट्रीलाई निकाल्ने क्रममा स्थान सब भन्दा सान्दर्भिक पोइन्टहरू मध्ये एक हो। यसको लागि हामीले धेरै प्यारामिटरहरू ध्यानमा राख्नुपर्दछ, ती सबै प्रत्यक्ष रूपमा उपभोगसँग सम्बन्धित छ।
यसका लागि हामी जाँदै छौं सेटिंग्स> गोपनीयता> स्थान र भित्र हामी कार्यशीलता को एक भीड फेला पार्नुहुनेछ। पहिलो चीज भनेको हामीसँग कन्फिगर गर्नु पर्ने धेरै महँगो हुनुपर्दछ "जब प्रयोग गरियो" सबै अनुप्रयोगहरू मार्फत, यो सुनिश्चित गर्न कि स्थानीयकरण अक्षम रूपमा प्रयोग भइरहेको छैन।
यद्यपि त्यहाँ धेरै संख्यामा सेटि settingsहरू छन् जुन विशेष गरी ब्याट्रीको लागि हानिकारक हुन्छ र भनिन्छ "प्रणाली सेवाहरू" हामी पहिले कुरा गरिरहेका थियौं स्थानीयकरण सेटिंग्सको तल। हामीले हो वा हो प्रविष्ट गर्नुपर्दछ जहाँ यी सेटि especiallyहरू विशेष प्रासंगिक छन्।
हामी सिधा जान लागेका छौं "महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू", स्थान सेटिंग्स कम कम उपयोगी र अधिक ब्याट्री खपत द्वारा। म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईं उत्पादन सुधार कार्यहरू निष्क्रिय गर्नुहोस्, तर विस्थापनको अंशांकन, समय क्षेत्र वा अन्य प्रकार्यहरू यसको उपयोगितामा विशेष सान्दर्भिकताका साथ छैन।
स्वचालित चमक र activ सक्रिय गर्न लिफ्ट »
हामी अब स्क्रिन सेटिंग्सको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन धेरैलाई खराब प्रतिक्रियाहरुको साथ कन्फिगर गर्ने खराब बानी हुन्छ। पहिलो पर्दाको चमक हो। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले स्वचालित चमक असक्षम पार्छन किनकि उनीहरू ब्राइटनेसलाई सकेसम्म कम राख्न चाहन्छन्।
जहाँसम्म, तपाईले यसलाई अपलोड गर्दा तपाईले यो समायोजित गर्न बिर्सनु हुन्छ। आईफोनमा राम्रो प्रकाश सेन्सर छ जुन तपाईंलाई अनुमति दिनेछ स्क्रीन गुणवत्ता र सबै समयमा पर्याप्त चमकको मजा लिनुहोस्, स्वचालित चमक सक्रिय गर्नुहोस्।
अर्कोतर्फ, आईफोनसँग «सक्रिय गर्न लिफ्ट, यसले आईफोन स्क्रिनलाई सक्रिय बनाउनेछ जब हामी यसलाई अनुहार आईडी मार्फत आफूलाई चिनाउनका लागि लिफ्टिंगको प्राकृतिक इशारा के हुन्छ। जे होस्, यो प्राय जसो बेवास्ता ब्याट्री नाली हो।
म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईले यो कार्यक्षमता निस्क्रिय गर्नुभयो, किनकि अभ्यासमा पर्दा बेतुका क्षणहरूमा मोडिन्छ, विशेष गरी जब यो ब्याकप्याक वा झोलामा हुन्छ, राम्रोसँग। मेरो सिफारिश यो छ कि तपाईं यो कार्यक्षमता सकेसम्म चाँडो छुटकारा पाउनुहुनेछ।
4G लाई मूल्यवान छ?
ब्याट्री उपभोगको सबैभन्दा निर्धारण कारकहरू मध्येको कभरेज हो, दुबै वाइफाइ र विशेष गरी मोबाइल डाटा। यस अवस्थामा, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले विचार गर्दैनन् कि यो वास्तवमै 4G सक्रिय हुनु लायक छ कि छैन, र यो केहि केसहरू छन् जुन सिफारिस गरिएको छैन।
ज्यादै थोरै 4G कभरेज भएको क्षेत्रमा, जहाँसम्म, 3G कभरेज स्थिर र उच्च छ, न केवल यसले हामीलाई ढिलो नेभिगेट गराउँदछ, किनकि त्यो G जी अस्थिर हुनेछ, तर हामी ब्याट्रीको एक ठूलो मात्रा उपभोग गर्नेछौं किनभने एन्टेनाले धेरै शक्ति प्राप्त गर्नेछ।
यसैले म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं जानुहोस् सेटिंग्स> मोबाइल डाटा> आवाज र डाटा। त्यहाँ तपाई G जी र between जी को बीचमा छनौट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, वास्तवमा केही कम्पनीहरुमा पनि तपाई २ जी को लागी अप्ट इन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, यद्यपि म यसलाई २०२० बीचमा सिफारिस गर्दिन।
त्यो कत्तिको सजिलो छ तपाईं धेरै ब्याट्री बचत गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, मितिमा सबैभन्दा परम्परागत सल्लाहहरूको साथ।
ब्याट्री प्राप्त गर्न सानो सल्लाह
लगातार २०% मुनि ब्याट्री नहटाउनुहोस्, यसले लगाउन सक्छ।
आईफोनलाई ब्याट्री बिना नै बन्द गर्न अनुमति नदिनुहोस्, यसले सम्भवतः ब्याट्रीलाई विच्छेदन गर्न निम्त्याउँछ र तपाईंसँग विश्वसनीय नतीजा हुँदैन।
अँध्यारो मोडको फाइदा लिनुहोस्, यो कार्यक्षमताले विशेष गरी कम प्रकाश वातावरणमा सुधारको प्रस्ताव गर्दछ, र तपाईंले आईफोन ११ प्रो जस्ता एमोलेड उपकरणहरूमा पनि ब्याट्री बचत गर्नुहुनेछ।
वालपेपरको साथ सावधान रहनुहोस्, यदि तपाईं कालो पृष्ठभूमि छनौट गर्नुहोस् वा सम्भव भएसम्म गाढा, तपाईं धेरै ब्याट्री बचत हुनेछ।
र यी हाम्रो मुख्य सुझावहरू छन् अधिकतम ब्याट्री बचत गर्नका लागि। हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईंले यस भिडियोलाई अवलोकन गर्नुहुनेछ जुन यस पोष्टको नेतृत्व गर्दछ र च्यानलको सदस्यता लिनुहोस् सबै एप्पल जहाँ हामी यी खबरहरू अपलोड गर्न जारी छौं र अधिक अझ धेरै जसले तपाईंलाई तपाईंको आईफोनबाट अधिक पाउन मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » आईओएस १ in मा ब्याट्रीको जीवन सुधार गर्ने युक्तिहरू
शुभ अपराह्न मैले महत्वपूर्ण ठाउँहरू हटाएको छु तर उनले मलाई चेतावनी दिन्छन् कि मैले कार्प्ले नक्शा इत्यादिमा फाइदा गुमाउनेछु, यो सत्य हो वा यसले नेभिगेसनमा प्रभाव पार्नेछ, अभिवादन
कसरी आईफोन १२ घटना हेर्नुहोस्